कुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ? हुनसक्छ खतराको घन्टी – Jagaran Nepal
कुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ? हुनसक्छ खतराको घन्टी
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको नसर्ने रोग सम्बन्धि जोखिम तत्वको सर्वेक्षणले पनि १५ दशमलब २ प्रतिशत व्यक्तिमा टाउको दुखाइको समस्याका कारण काम नै गर्न नसक्ने अवस्थाामा पुगेको देखाएको छ।
कुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ?–यदी तपाईलाई आफ्नो टाउँको भारी महसुस हुन्छ र थिचिए जसरी छट्कीएर दखिरहन्छ भने तपाईलाई धेरै तनाव भएको हुनसक्छ । मानिसलाई धेरै तनाव भएर पुरै टाउको भारी भएर दुख्ने गर्छ।
– यदी तपाईको टाउकोको अगाडीपट्टिको भाग टन्किएर दुख्छ र टाउको उठाउन गाह्रो हुन्छ भने तपाईलाई पिनास भएको हुनसक्छ । पिनास भएको समयमा पनि मानिसमा टाउको दुख्ने गर्छ।
–यदी टाउकोको अगाडीपट्टि दुख्ने, आँखा गल्ने, टाउको गल्ने समस्या छ भने तपाईको आँखाको पावर नमिलेको हुनसक्छ।